Kwenzekani emzimbeni ngesikhathi sokulala? Izinqubo emzimbeni ngesikhathi sokulala
Kuyinto imfihlo ukuthi iphupho - kuba ebalulekile izidingo begazi umzimba. Kuyasiza ukubuyisela amasosha omzimba umuntu, ukuze oda etholwe ngesikhathi Imininingwane sihlale siphapheme futhi ukusekela izinqubo abaningi ukuthi kuze kube sekupheleni, ngasendleleni, hhayi lotifundze. Funda kabanzi mayelana nokuthi kwenzekani yomuntu ngesikhathi elele, sizobe ukukhuluma okwengeziwe.
Izingqondo zethu nomzimba kudingeka ziphumule, bahlunyelelwe owusizo kakhulu kule ndaba kuyinto iphupho. Wasidlulisela, nganoma isiphi isizathu, siyozizwa ukuthi asikwazi ukuhambisa ngokuvamile, kusukela lwaphuka ukuhlobanisa izinto, kanye inkumbulo nekhono ukugxila kakhulu buthaka. Uma nokungalali kuba eside, zonke lezi zimpawu benzelwe, iyakhula futhi, phakathi kwezinye izinto, babe engelapheki. Ayikho nokuswela wonder ubuthongo bekulokhu sokuhlushwa inonya.
Ngoba isilinganiso 8 amahora, okhethwe umuntu esokulala enempilo ebusuku, waqaphelisisa 5 ubuthongo imijikelezo ithatha imizuzu 100 ukuba. Ngaphezu kwalokho, ngamunye wabo izigaba ezimbili - ubuthongo kancane futhi okusheshayo. kanjani zenzeka?
Ukuze siqonde ukuthi kwenzeka ngesikhathi sokulala, ake sihlolisise esiteji yakhe.
Ukhathele noma ukugula ngosuku olwandulela abantu babelala ithuba kancane ukulala futhi ngokushesha ingena esigabeni okuthiwa ubuthongo okusheshayo noma nakuba.
Lalibizwa ngokuthi ngakho ngoba ngaleso sikhathi elele kokufunda Bheka, kwenhliziyo ukuphefumula zifana izinkomba yomuntu nokuvuka, kodwa cishe bonke imisipha (ngaphandle diaphragm, imisipha ossicles sokuzwa, kanye nokubamba nezinkophe bese ukuhambisa yeso) ulahlekelwe ngokuphelele ithoni zabo . Yilokho okwenzeka ngesikhathi sokulala fast (nakuba) isigaba sakhe kungenziwa libhekene kanje: umzimba ulele, nobuchopho usasebenza. By the way, ngalesi sikhathi sibona acacile kakhulu futhi kulula ukukhumbula amaphupho.
Ngemuva kwemizuzu engu-20 kusukela ekuqaleni ukulala umuntu engena esigabeni se kancane wave ubuthongo.
Kwenzekani ngesikhathi REM
I isabelo-non-REM, njengoba ochwepheshe wathola, lokulandisa 75% ukuphumula ebusuku sika. Ezamukelwe cabangela izinyathelo eziningana kulomkhakha.
Ukozela. Uma enempilo futhi ulale ngesikhathi, kuthatha 5-10 imizuzu, lapho ongakwazi afakwa ubuthongo obukhulu.
Babecwiliswa ngephupho. Lesi sinyathelo ngokuvamile kuba cishe wu 20 imizuzu. Kwenzekani emzimbeni ngesikhathi sokulala kulesigaba? Inqubo libhekene okwehlisa izinga lokushaya kwenhliziyo, ukwehla kwezinga lokushisa komzimba kanye okuvela Bheka okuthiwa "nokwakha uthi lokuphotha ubuthongo" (imisindo emifushane umsebenzi ubuchopho nge amplitude ongaphakeme), ngesikhathi lapho umuntu ukwazi cishe unqamukile.
Ejulile delta sokulala. Sleeping ngalesi sikhathi kunzima baphaphame. Ngisho uphapheme, akakwazanga isikhathi eside ukuba ngilulame. Kuyinto kulesigaba kungenzeka ukubonakaliswa sleepwalking, enuresis, ukhuluma ngo ebuthongweni obumnandi.
Khona-ke indoda, sengathi ukuqala baphaphame, ingena isimo REM. isigaba okunjalo ukuqhela zenzeka phakathi nazo, futhi uma yokugcina kwanele, base bevuka umuntu azizwa fresh, fresh, olusha.
izinqubo bokuphila ezenzeka ngesikhathi sokulala
Esikhathini isidumbu sowesilisa ilele, naphezu obucwathile zakhe zangaphandle, ukuqabuleka ukuwaphendula ezintweni (Yiqiniso, uma bengekho enamandla kakhulu), uyagijima eziningi izinqubo.
Through the isikhumba ngalesi sikhathi bathambekele shabalala eningi umswakama, okuholela encane kwesisindo.
It kwandisa ukukhiqizwa iprotheni ethile - collagen ikhuthaza, ngasendleleni, kuqinisa imithambo yegazi kanye ukubuyisela kuyaqina kwesikhumba. Ngokusobala, ifilimu kanye pop izinkanyezi kungukuthi etshela yonke indaba, ethi ufuna okuhle kuyabasiza eqinile 8 ukulala amahora (Nokho, kuwufanele ukucacisa: hhayi ngokushesha ngemva dinner eqotho).
Ngaphezu kwalokho, umuntu ngephupho ezikhulayo (yebo, lena akuyona omama letingemaciniso kanye ogogo abangamazi kanjani ukubeka embhedeni ingane ukubuyisa), njengoba i-hormone ayo ukukhula ngalesi sikhathi has emakamu elikhulu igazi.
Njengoba umuntu ngilale ngaso ke enye ngemva kwenye ephumula cishe yonke imisipha yomzimba, ngaphandle kwalabo ukuthi ubambe Isivalo ivaliwe. Bazigcina onezinkinga, kanye zamehlo ehamba ngaphansi kwabo, ngenhlanhla, libonisa esiteji ezijulile REM.
Njengoba ubona, izinqubo emzimbeni ngesikhathi sokulala nhlobonhlobo - ngosizo lwabo eyenziwa uhlobo ukuhlanzwa ukuthi ilungiselela umzimba ngoba ukuqapha nsuku zonke.
Kungani sidinga ukulala ubuchopho
Iqiniso ukuthi ubuchopho bethu akusona ithule ngesikhathi sokulala, uyazi cishe wonke umuntu. Phakathi esokulala ebusuku, yena cishe akusho nokusabela ezintweni ezenzeka ngaphandle futhi ligxile izidingo zasekhaya, ekufezeni umsebenzi oyinhloko okwamanje -. Ukuhlelwa ngemihlobo nokucubungula ulwazi nsuku zonke futhi uyithumele ku kulondolozwe endaweni ezindaweni ezithintekile 'yemfanelo ayiphathisiwe "
Phela, kule nqubo, konke okwenzekayo ebuchosheni ngesikhathi sokulala, kungaba kubhekwe uhlobo "entwasahlobo yokuhlanza." Kusisiza ukuba baphaphame ekuseni nomunye - a ecacile neqondakalayo - sibheke izinkinga ezazibonakala izolo zingaxazululeki. Sekuyisikhathi eside A abafundi esikoleni ekolishi bazuza kulolu, lo mbiko uvuma ukuthi iyiphi into engcono okumelwe ulikhumbule ukuthi izinto utadisha ngaphambi kokulala.
Uma umuntu uhlangabezana njalo yokuntuleka njalo ubuthongo, ubuchopho akuyona isikhathi esanele ukuhlela bese efakwa "inkumbulo amaseli" uthole ulwazi lokuthi kuholela izikhalazo mayelana inkungu ekhanda lami memory ukungakhuli eqinile.
Njengoba kukhona "wokuwasha" zobuchopho
Umangele, "Kwenzekani emzimbeni ngesikhathi sokulala?", Abacwaningi bathola ukuthi isimo afana kwamangqamuzana nezicubu zobuchopho lifana uhlobo "enema ukuhlanzwa." Ngemva wobuthi ufake umzimba ngokudla, noma ngenxa ukuphazamiseka nawukucindezeleka, kuthiwa imali hhayi kuphela emathunjini ipheshana, isibindi noma izinso. Bona, kuvela, buthelela uketshezi zobuchopho nomgogodla futhi ugebhezi.
Ephusheni, lo izinzwa ezizungezile , amaseli glial shwabanisa, nokuncipha ngobukhulu, lapho isikhala intercellular kuba ikuvumela ukudlulisa uketshezi xaxa. Futhi yena, yona, futhi ukushiselwa ubuthi nerve izicubu, ekupholiseni nathi kusukela kumiswa amaprotheni zingcwecwe engase ukuvimba ukudluliselwa amasignali phakathi sezinzwa neqhaza ekuthuthukiseni ekuseni isifo i-Parkinson noma i-Alzheimer.
Yini umuntu akudingayo ngemva kokuba ukulala?
Ngakho, saxoxa okwenzekayo emzimbeni ngesikhathi sokulala. Ukubeka bese ukugibela ngemva kwakhe bejabule futhi benziwa baqabuleke, ngamunye wethu kudingeka isikhathi ezahlukene. Ubude ubuthongo abantu bachitha amahora emihlanu kuya kweyishumi ngosuku. Somnology (ongoti abasebenza nezinkinga ukulala kanye nomthelela wakhona empilweni yomuntu) bakholelwa ukuthi lokhu kubalulekile kakhulu kunokuba nenqwaba yabangane, futhi izinga esokulala ebusuku ngathi.
It is waphawula yini ukuthi abantu elele ngokuthula futhi akuvamile kokushintsha ukuma, bazizwe beqabulekile ngaphezulu ekuseni waphumula kuka labo eziningi uqwashile futhi siphenduka emanzini. Kodwa ngasizathu simbe, kubonakala ukuthatha isikhundla ukhululekile embhedeni, thina, nokho, ukushintsha isikhundla? It kuvela ukuthi ubusuku bethu ukunyakaza kukhona incike ezenzeka ngaphandle - ukubaniza ukukhanya, umsindo, kushintsha izinga lokushisa komoya, ingane inyakaza owayelele eceleni womshado noma umntwana, njalo njalo ..
Somnology bakholelwa ukuthi u-70% lezinhlangano Iveza isithombe esibi gxuma ku esigabeni ezijulile izinga ubuthongo, noma kunalokho ekhonweni lakhe. Futhi nje akukwenzi umuntu ubuthongo egcwele. ushintsho isikhundla ngokuvamile sisenza kanye eqinile, futhi isisu ukugcwala, futhi nempilo ebuthaka, futhi ngenxa yalokho, uya ukuphumula, udinga ukudala i-ngokwayo izimo ukhululekile kakhulu.
amaphupho Mayelana ongokwesiprofetho
Somnology ukutadisha amaphupho, kuqondwe okuthiwa "amaphupho angokwesiprofetho" futhi wafinyelela esiphethweni ukuthi empeleni akukho ezingaqondakali. Ukuzama ukuxazulula kubo, akudingekile ukucabanga ukuthi kwenzekani emphefumulweni ngesikhathi sokulala. Akukona nokuzula yakhe imihlaba ephakeme, hhayi - nje ngo lwesigaba of kancane wave ubuthongo ubuchopho bomuntu ucosha amasignali kusuka izibilini, futhi adlulisele kubo ngesimo izithombe ngokucace. Umuntu nje ubona amaphupho ezinemibala ukuzichaza kungenziwa okusekelwe zokuchaza elula.
Ngokwesibonelo, uma iphupho imifino ebolile noma inyama eluhlaza (ngamanye amazwi, imikhiqizo engenakudliwa ngobubi bawo), - kusho kunenkinga nge isimiso sokugaya ukudla bungene. Futhi amaphupho amabi ukuthi abantu kokuziklinya noma ominzayo, njengoba umthetho, ubufakazi ukungasebenzi izitho zokuphefumula. Zomlilo kungaba Dreamland nge angina, njengoba omunye izimpawu zalesi sifo nje umuzwa esivuthayo esifubeni.
Kodwa kule indiza iphupho - uphawu olucacile lokukhula izingane enhle kubantu abadala.
Ukulala kunzima overestimate ukubaluleka
Konke okwenzekayo emzimbeni ngesikhathi sokulala is haunted by abacwaningi. Kunjengoba isimo ezidingekayo futhi Irreplaceable lomuntu wafunda odokotela, bengqondo, ngisho esotericism.
Duzane ngokuthi izindikimba, kukhona izinganekwane eziningi umzwelo, kodwa musa kakhulu wathwalwa yizingelosi kubo, ngoba iphupho - ngokuyinhloko ithuba lokubuyisa nobungqabavu kanye ukulondoloza impilo. Ngakho ukunakekela ubuthongo kanti ukucabanga inqubo bokuphila echazwe ngenhlonipho!
Kuyini i-laptop iziphi imisebenzi yayo?
Online ifenisha izitolo eMoscow
I-Schaaken Castle: i-Middle Ages yamanje e-Kaliningrad yanamuhla
Imincintiswano ngosuku lokuzalwa kwabantu abadala. Izindlela ephathini ekhumbulekayo
Ukuhumusha kanye nencazelo ye-rune Ansouz
Kanjani futhi kungani udinga ukususa amakhukhi esipheqululini sakho?
Proper ingane ubuthongo
I-Antarctic icefish - iresiphi
Izimiso yenhlangano kanye umsebenzi apharathasi isimo kanye nabasebenzi bakahulumeni
Indlela ukukhulisa umfana kahle eminyakeni yokuqala yokuphila kwakhe
Ukudla kwe-protein-carbohydrate kuyindlela enhle yokukhipha ama-fat deposits